Chii chaungaona muCáceres: inoshamisa zvisingaenzaniswi yakaoma | Kufamba Nhau
Cáceres, chii chekuona muguta rinozoita kuti udanane
Luis Martinez | | España, Chii chekuona, famba
Mufananidzo wePlaza Meya muCáceres
Kushanyira Cáceres kuri kufungisisa nhoroondo yehupenyu, sezvo yakavambwa seguta nevaRoma muzana ramakore rekutanga BC. Yakaparadzwa nemaVisigoths, yakazvarwa patsva nemaArabu uye yakakundwa nevaKristu muna 1229, vakaipa chinzvimbo cheguta chairo pasi pekurairwa ne Shumba korona.
Humambo hweCáceres hwaive hwakakosha munguva dzeMadzishe eKatorike naCarlos I. Ipapo yakararama munguva yehushe kuti ibude zvekare muzana ramakore rechiXNUMX pakagadzwa mairi Royal Court reExtremadura uye kusvika kwevanobva kune dzimwe nyika kubva dzimwe nzvimbo dzeSpain. Kukura kwayo kwakapfuurira muzana ramakore rechiXNUMX neXNUMX. Pane izvi zvese zvaramba zviri muCáceres inhaka inoshamisa kuti iwe uchave zvirokwazvo unofarira kuziva.
1 Idzo zviyeuchidzo zvaunofanira kushanyira muCáceres
1.1 Guta Rekare reCáceres
1.2 La Plaza Meya
1.3 Santiago square
1.4 San Juan square
2 Cáceres zvakasikwa
Idzo zviyeuchidzo zvaunofanira kushanyira muCáceres
Nhoroondo yakapfuma yeguta reExtremaduran inoratidzirwa mune yakafara seti yezvivakwa zvaunogona kuona mazviri. Nekudaro, iri yega, iyo guta rekare yakakosha kushanya kuCáceres, sezvazviri Nhaka Yenyika kubva 1986. Tiri kuzotanga rwendo rwedu rweguta.
Guta Rekare reCáceres
Guta rekare reCáceres rine kosi yayo munzvimbo yakatarwa neyekare roman masvingo (Ndicho chinozivikanwa seGuta rekare kana reMonumental), asi zvakare ine zvivakwa zvekare kunze kweizvo.
Nekudaro, iyo nzvimbo yetsinga yeGuta reKare ndiko kusangana kwePaza de los Golfines uye Plaza de Santa María, ayo anoumba nzvimbo huru izere nezvivakwa. Iyi nharaunda inotongwa ne co-cathedral yeSanta María, chishamiso chekutanga cheGothic umo tsika dzevaRoma dzinogona kuonekwa. Nekudaro, iyo chete shongwe ndeye Renaissance uye yakapfekedzwa korona nemufananidzo weSan Pedro de Alcántara.
Asi, kana iwe uchizoda kunze kwayo, zvinokushamisa iwe zvakanyanya mukati. Chinokosha ndicho chikuru chakakwirisa, muPlateresque maitiro, ayo kumberi kwesacristy zvakare. Nezve machechi, mune iyo yeBlázquez unogona kuona kuvezwa kweiya inonzi Nhema Kristu weCáceres, yakanyorwa muzana ramakore regumi nemana, uye mune iyo yeSan Miguel iwe une yakanaka baroque altarpiece. Nhengo kubva muna 1703 inogumisa runako rweiyi tembere iyo iri Yenhoroondo Yehunyanzvi Monument kubva ku1931.
Mufananidzo weImba yeVelta
Kune rimwe divi, kutenderedza kereke huru, iwe unogona kuona akati wandei dzimba dzeumambo nedzimba dzevakuru. Pakati peyaimbove, iyo Carvajal muzinda, yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX; iyo Episcopal uye Hernando de Ovando, zvese Renaissance uye iyo Golfines de Abajo, iyo inosanganisa iyi dhizaini neyeuchidzo yeGothic.
Zvimwe zvivakwa zvekufarira Guta Rekare ndiyo chechi yeGothic yeSan Mateo; Imba yeStorks, neshongwe yayo yakashongedzwa; iyo Muzinda weVeletas, kwaunogona kuona tangi rekare reAlmohad muguta; iyo Imba Yemabhiza, anga ari matanga ekare, uye Imba yeZuva, nehunhu hwayo hwekushongedza pane façade. Iwe unogona kutopinda muOld Jewish Quarter yeCáceres.
La Plaza Meya
Asi Cáceres, senge mamwe maguta eExtremadura, ichiri kukupa iwe mamwe akawanda matombo. Mukukwikwidzana kwepedyo nenzvimbo yambotaurwa, ndiyo Plaza Mayor, iri kumabvazuva kwechidziro. Izvi zvakanyatso kuyambuka ne Nyeredzi Arch, ane mavambo anotangira muzana ramakore rechiXNUMX, asi iro rakagadziridzwa munaXNUMX naManuel de Lara y Churriguera.
Muchikamu chekumaodzanyemba chekwere pane iyo Foro de los Balbos ine mbiru yeSan Francisco, Plateresque yekumwa yekunwa kubva muzana ramakore rechiXNUMX. Asi kukwezva kukuru kwenzvimbo ino ndiko kuisa Bujaco tower, chivakwa cheArabhu chakaguma nehondo.
Mufananidzo weArch yeiyo Nyeredzi
Pfungwa mukati maro kereke yeSantiago de los Caballeros and the Francisco de Godoy muzinda. Asi, munzvimbo dzakapoterera iwe unowana zvakare kuvaka kweiyo Royal Audience, Yakavakwa muzana ramakore gumi nemasere, iyo Coria tower uye Socorro arch, dzimba dzehumambo dzehuwandu hweSanta Olalla neMarquis yeCamarena kana imba yeLa Culebra, pakati pezvimwe zvivakwa.
Sachigaro ne chechi yeSan Juan de los Ovejeros, iyo yakaumbwa nedzimba dzakasiyana dzemadzishe kana dzimba dzakanaka dzakadai seyaMarquis de Oquendo, iya yeMarquis de Monroy uye imba yaOvando Espaderos. Pedyo padyo nekwere iyi iwe unowanawo iyo Great Theatre, chivakwa chakanakisa kubva muchikamu chechipiri chezana ramakumi maviri. Uye, kumberi zvishoma kure, iyo Mochada Tower uye hermitages senge Las Candelas kana San Ildefonso.
Sezvauri kuona, kune akawanda mamaki aunofanira kuona muCáceres. Asi iro guta reExtremaduran rinokupawo nzvimbo dzinoyevedza uye gastronomy.
Cáceres iri pakati peSierra de la Mosca neSierrilla. Naizvozvo, nharaunda dzayo dzinopa iwe nharaunda dzakanaka uye nharaunda. Mupfungwa iyi, iyo Los Arenales yakaoma, yakaumbwa nemadhodhi matatu kumadokero kweguta.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida Ornithology, muCáceres une tsinga. Zvine nzvimbo sere dzekuchengetedza shiri. Uye mavari iyo yakaderera kestrel huwandu hunobuda.
Mufananidzo weEpiscopal Palace yeCáceres
Iyo gastronomy yeCáceres ndiwo mhedzisiro ye iwo musanganiswa weCastilian chikafu chine vestiges echiArabic uye Sephardic. Uye zvakare, zvakawanda zvezvigadzirwa zvinogadzirwa mudunhu zvine zita rezvakabva, izvo zvinowedzera kugadzirisa gastronomy yayo. Iyi ndiyo kesi yeIberian ham, paprika kubva kuLa Vera, Torta del Casar kana cherry kubva kuJerte.
Pakati pemidziyo iyo iwe yaunogona kuravira muCáceres uye iyo isingazokusiye usina hanya ndeye iyo chanfaina, chikafu chakagadzirwa negwayana kana nyama yenguruve, hanyanisi, bay leaf, chilli uye imwe mhando yetsanga inogona kuva bhinzi kana mbatatisi. Iwe zvakare uchada iyo Fry, nembatatisi, gwayana uye paprika; iyo Extremadura stew; pickled mbatatisi pamwe tench uye Extremadura zvimedu.
Kufanana nezvinonaka zvinotapira, une imbwa diki, iyo florets kana iyo pestiños. Uye, kusuka chikafu, iwe une chinoshamisa waini kubva kuRibera del Guadiana uye iyo Nyika yeExtremadura, mazita maviri ewaini anobva kuCáceres.
Muchidimbu, pane zvakawanda zvaunofanira kuona muCáceres. Uye chakanakisa ndechekuti, nekuda kwenzvimbo yayo, iri padyo nemamwe maguta eSpain. Naizvozvo, unogona kuishanyira pakupera kwevhiki kana kwevhiki refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Cáceres, chii chekuona muguta rinozoita kuti udanane